Menus 9 amin'ny CSS mba hampisondrotra ny tranokalanao | Famoronana an-tserasera
ny Ilaina tokoa ny menus sisiny ankehitriny hanolotra ny mpitsidika ny hetsika lehibe indrindra izay mitondra azy any amin'ny faritra rehetra amin'ny tranonkalantsika. Izany no antony itondranay andian-dahatsoratra 9 sidebar na sidebar CSS menus ho anao hampidirina azy ireo ao amin'ny tranonkalanao ary hampiditra isa ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny PC-nao.
Esa zava-dehibe ny traikefan'ny mpampiasa Androany amin'ny finday avo lenta na tablette satria ity no fitaovana entin'ny tsirairay eny an-tànany. Ny fahamoran'ny fidirana dia ahafahan'ny mpampiasa maro manome solontena amin'ny finday fa tsy solosaina, noho izany dia ilaina ny fananana ny tranonkalantsika mamaly. Lisitry ny menus hafa, toy ity hafa ity izay nozarainay herinandro vitsivitsy lasa izay.
1 Bara-baravarana mamaly
3 Famaritana sidebar
4 Sidebar Admin
6 Menio Sidebar
7 Fitaovana fitetezana sidebar
8 Manidina CSS madio
Este ny menio dia manome fanampiana an'i ARIA ary azo ampiasaina amin'ny fomba mombamomba azy sy ny endriny. Miaraka amina endrika manokana, misongadina samirery ny fanolorany sary mihetsika mahafinaritra ho an'ny Facebook, ary andiana fanidinana izay mamoaka sarimiaina marobe hametrahana ny totoboka rehetra amin'ny famolavolana tranonkala.
Feo maizina, tsy maninona ity menio lafiny CSS ity maro loko noho ny loko ny fampandrenesanao sy ny hakanton'ny sarimiaina nataonao. Mampiasa menio mirotsaka any Bootstrap izy io, ka hanana ny fenitry ny famolavolana tranonkala eo am-pelatananao rehefa ampidirinao ao amin'ny tranonkalanao izany. Kalitao avo tsy misy fisalasalana.
Lisitry ny lafiny iray miorina amin'ny mari-pamantarana apetraka amin'ny ilany havia. Azontsika atao ny manindry ny kisary hamburger hanokafana ny tontonana eo amin'ny lafiny na tsindrio fotsiny ireo fizarana tsirairay. Izy io dia manana fampandrenesana maro loko ihany koa mba tsy hanan-java-mahory ity menio lafiny ity ao amin'ny CSS.
Ity menio lafiny ity dia misy hafa sary masina fantsakana maro loko ka mihitatra izy ireo rehefa manodikodina ny faritra tsirairay izahay. Menu amin'ny HTML sy CSS raha hampidirina haingana amin'ny tranokala vaovao izay noforoninao ho an'ny mpanjifa.
Ity menio sisiny ity ary bara fitetezana na navbar dia vita amin'ny CSS. Azontsika atao ny manindry ny kisary hamburger hanitarana ny safidy rehetra ao amin'ny bara fitetezana ambony, na avelao fotsiny ny mpanondro totozy isaky ny faritra. Feno sy miavaka amin'ny fahaizany rehetra.
Ny menio eo anilany amin'ny volomparasy izay tsy dia miavaka noho izy somary mijanona ary amin'ny menio sisiny midadasika izay mandray be dia be ny toerana sisa tavela amin'ny ilany havia amin'ny tranonkalanao.
Fitaovana fitetezana sidebar
Manidina CSS madio
Lisitry ny lafiny iray aseho sy aseho ary izany dia voalahatra fotsiny tamin'ny CSS. Tsotra amin'ny fiorenany, fa vokany lehibe mba hanana endrika tsara tarehy nefa tsy be mpitia. Iray amin'ireo menus sisiny ireo izay hita fa tsy ao. Inona no mety ilaina?
Avelanay ianao ity lisitra CSS hafa ity so it zahao hatrany ny haavon'ny ny famolavolana tranonkala ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Menu CSS sidebar 9 tsy azonao adino